トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Faa'iidada iyo faa'iido darrada dooneysa model ah boor qowladda pachinko ah
daydo Signboard, waxaan doonayaa inaan ciyaaro macaamiisha ugu badan ee qowladda pachinko ah, 's alaabta saftay. daydo Signboard, laakiin kala duwan by dukaan kasta, waxaan sida caadiga ah waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah taxane ah oo caan ah oo dheer-taagan. Isagoo ka hadlayay sababta, taxanaha caan baxa Xintai ka soo socda si ay u soo socda. nooc ka mid ah taxane la mid ah, haddii badan Tsukaere sida model ah oo xuddun, dukaan, taasu waa model this u badan tahay in la abuuro xoog iyo image.
Sidaas daraaddeed, waxaan jeclaan lahaa inaan eegno faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay ku dhaceen mar walba ah lagu daydo calaamad kasta oo tii pachinko.
sida faa'iidooyinka, waa in uu yahay mid deggan oo dhan. Gaar ahaan sixitaanka ciddiyaha iyo goob Horukon, waxaan u malaynayaa in meesha ugu waa weyn in uu yahay mid xasilloon. daydo Signboard, sababtoo ah waa calaamad ka mid ah abuurista wadada image dukaan mid ah magaca, waa model ah in aanay si fudud ama si miiska oo dhan mishiinka kabashada kartaan. Gaar ahaan, haddii joogtada ah waxaa ku jira dad badan oo lagu daydo inay la soo wareegto, u janjeera sida uu noqon doono xoog.
sixitaanka dhidib waa suurto gal in ay tahay mid deggan, tan iyo xawaaraha wareeg ah, tusaale ahaan kun oo yen waxaa had iyo jeer deggan, si fudud ayaa lagu calaamadeeyay leh qiyaas ah oo maalgashi, waa in dagaalka of data-oriented noqon kartaa. Celceliska ku wareegsan, oo weliba lagu daydo boor filanka sare maalin kasta, noqdaan wada dhakhso ah halkii, ayaa in ka badan si dabiici ah ku dhacay celcelis ahaan. The xog dheeraad ah, sidaas oo kale ayaa loo isticmaali karaa sida wax go'aan ah in la akhriyo la ruxruxo ee Horukon iyo dagaal ROM waxaa jiri doona in nugul ah.
Intaa waxaa dheer, tan iyo markii uu ku daydo boor inta badan qowladda pachinko ayaa lagu rakibay ka badan tirada, waa in sixitaanka dhidibkii horyaalka oo dhan maalin kasta, waxay noqon doontaa in markii wax aan macquul aheyn. Haddii badan Horukon set of Hanemono si ay ula qabsadaan kubada baxay sixitaanka dhidib ah, lambarka kiiska sida dukaamada waaweyn waa weyn yahay, waxaa ka mid ah xeeladaha of Ujeedada in dhigo.
khasaaro ah in uu yahay, oo ka hadlaya waxa uu, dhab ahaantii waa inay la soo wareegto lagu daydo, koror joogto ah, waa in xaqiijinta of madal ay adag tahay. Joogtada ah, aad ku socoto in ay booqan loogu talagalay model ah boor ee dukaanka. Qof kasta, waxay ahayd hortiisa in ku dhuftay ururtay yihiin joogtada ah inay la soo wareegto lagu daydo Waxaan qabaa in ay jirto.
waayo, in, joogtada ah dukaan pachinko waa la badan, heshiis oo ka mid ah pre-furitaanka waa wanaagsan yahay, oo kaliya saxiixa model ka subax ayaa noqon xaalad filanka sare. Wave miiska wanaagsan ee per boor model waa in aadan u fadhiisan doonaa mid ka mid subax tagaan. Waxaan isku dayay in la kordhiyo faa'iidooyinka iyo khasaaraha of model ah boor, si fiican ugu faa'iidooyinka, celcelis ahaan, inta badan, saxiixi doona model ah. Haddii aad lumay on model la doortay, waxaa laga yaabaa in miyir waa in ay isku dayaan in ay ku dhuftay model ah boor.